Masinina laser fibre, Laser fibre Cnc, fibre laser an'ny fibre - Guo Hong
Lehibe endrika feno mihidy laser latabatra takelaka takelaka fifanakalozana mandrindra rafitra mandeha ho azy feno sy famoahana entana, miaraka amina fonenana feno ...
Ny fandriana vy fanariana manana fanoherana tohina tsara kokoa, manamora ny fanodinana azy amin'ny haavon'ny marina kokoa; teorika, mavesatra ny fandriana, ny ...
Ny milina fanapahana laser fantsom-pahaizana mandeha ho azy dia fitaovana fanapahana fahombiazana avo lenta sy avo lenta ary azo itokisana izay manambatra ny compute ...
Milina fanapahana laser fibre Tube dia natao manokana ho an'ny fantsona, mora ampiasaina. Miaraka amin'ny kalitaon'ny fanapahana tsara sy ny fahombiazan'ny fanapahana, ny fantsona f ...
Ny takelaka vita amin'ny takelaka sy ny fantsom-bozaka dia mahatsapa ny fanapahana endrika roa samihafa amin'ny fitaovana milina iray ihany. Izy io dia mandray, valizy sy pinion ...
Ny latabatra fanodinana laser fibres latabatra dia afaka manapaka ny ankamaroan'ny ravina vy, indrindra ny latabatra fifanakalozana dia afaka mamonjy mihoatra ny 50% ny habaka sy ny vidiny ...
Masinina fanapahana laser fibre karazana misokatra, ny masinina iray manontolo dia mandray rafitra fitetezana sy pinion drive, natao manokana ho an'ny karazan-taratasy rehetra. Izaho ...
Ny milina fanapahana laser fibre mahery dia manana loharano laser laser mitarika izao tontolo izao izay miteraka laser mahery mifantoka amin'ny zavatra ...
Ny foiben'ny Guohong Laser Group dia hita ao amin'ny No. 1203, Laser Industrial Park, Distrikan'i Luohu, Shenzhen. Manam-pahaizana manokana amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famokarana ary ny varotra andiana fitaovana laser tanteraka. Ny orinasa dia manana kapital voasoratra anarana 130 tapitrisa yuan. Ny Guohong Group dia manana Guohong Laser Technology Hebei Co., Ltd., izay manodidina ny 12000 metatra toradroa ny velarany, ary ny Guohong Laser Technology (Jiangsu) Co., Ltd., izay mirefy 15000 metatra toradroa. Meter. Ny orinasa dia manana teknolojia mandroso iraisampirenena toy ny fanjairana herinaratra, fanapahana fantsom-pifandraisana an-tsokosoko telo sns. Nahazo ny orinasa teknolojia avo lenta, orinasa teknolojia tsy manam-paharoa miavaka, orinasa miavaka any amin'ny faritanin'i Hebei, orinasa kintana any amin'ny faritanin'i Jiangsu , orinasa fifanarahana sy azo itokisana, sns. Lohateny. Guohong Laser Group dia mpanamboatra milina fanapahana laser lehibe manambana ny R&D…
Cast Aluminium Beam
Loha manapaka manan-tsaina
Chuck Digital Digital
Rindrambaiko fanapahana Tube Tube matihanina
Tena 0 manamboatra
Ekipa famolavolana sy fananganana matihanina
Manana ekipa mpanao fananganana injeniera matanjaka; miaraka mamolavola teknolojia, drafitra fananganana fametrahana ary fandaharam-pametrahana alohan'ny hametrahana; miantoka ny fandrosoan'ny tetikasa tsirairay.
Fitsapana henjana mba hiantohana ny kalitao
Andiana fanaraha-maso henjana no natao tamin'ny fizotry ny famokarana, ary ny fototry ny fiantohana ny kalitaon'ny vokatra dia napetraka hatrany am-piandohan'ny fifantenana ireo akora. Amin'ny fizotrany, amin'ny alàlan'ny famokarana dingana samihafa, ary ny fanaraha-maso alohan'ny tsenan'ny vokatra vita dia fototra io voalaza etsy ambony io manome antoka matanjaka ho an'ny vokatra.
Fitaovana mandroso famokarana, fandefasana ara-potoana
Niara-niasa tamin'ny orinasa 500 an-tampon'izao tontolo izao izahay nandritra ny fotoana maro, nanome ny vokatra fitaovana milina miaraka amin'ny antoka ara-kalitao ara-potoana; fampidirana ivon-toeram-pivarotana milina CNC lehibe mba hahazoana antoka fa marina sy mora ny vidiny!
Serivisy aorinan'ny varotra tsara
Omeo laharam-pifaneraseram-pirenena ho an'ny serivisy 7 * 24 ora, sehatra consultant ofisialy ofisialy; antoka ny kalitaon'ny vokatra, raha misy ny olana, mifandraisa aminay amin'ny fotoana rehetra hamahana azy ireo ara-potoana; fitsidihana famerenana matetika (ao anatin'ny telo taona) ho an'ireo mpampiasa ary manome torolàlana ara-teknika amin'ny fotoana rehetra;
Ny fanapahana laser dia karazana tsy misy fifandraisana, miorina amin'ny dingan'ny famokarana hafanana ...
Amin'ny fiainana andavanandro, matetika isika dia manondro ireo fantsom-by vy toy ny fantsom-by, bu ...
Rehefa mampiasa milina fanapahana laser dia matetika mipoitra ny olana noho ny cont ...
Tamin'ny 22 aprily, IE expo China 2021 dia nahavita tany Shanghai, Sina. Manana esta ...
Ny fanapahana laser dia ny fanoloana ny antsy mekanika nentim-paharazana amin'ny invisibl ...